လူများထံသို့ ဗီရာချယ်လ်စလတ်ဗ်ရဲ့ မက်ဆေ့
MMM ဟာ ငွေကြေးနူးကလီးယားပါပဲ။
၁၉၉၃ အစောပိုင်းက မောစကိုမြို့ ကွန်စမိုလ်စကီး မိသားစုတိုက်ခန်းတွင်
ဒါဟာ သာမာန်မနက်ခင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ဆာဂျီးထက်နည်းနည်းစောနိုးနေပြီး မီးဖိုခန်းထဲမှာ ကော်ဖီသောက်ရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဆာဂျီးလဲနိုးလာကာ ဝင်လာပါတယ်။
" ဟေး ငါမျက်နှာသစ်ရင်း အကြံညာဏ်တစ်ခုရလာတယ်"
ငါတို့ self-quoting ငွေလဲနှုန်း ၂ဆကိုသုံးလို့ရတယ်!!
ဒါဟာ သီးသန့် သင်္ချာငွေကြေးအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်အလုပ်လုပ်ပုံပါ။ နာမည်ကို “overlapping double exchange rate” လို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ မကြာမီတွင် မီဒီယာများမှ "MMM Pyramid" လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ဆာဂျီးဟာ ငြင်းဆိုရန် များစွာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အသုံးမဝင်ကြောင်းသိလာရပါတယ်။ ၂၀၁၁ တွင် "သူတို့ခေါ်ချင်လား၊ ခေါ်လေ" ဟုခံယူပြီး MMM Pyramid လို့တရားဝင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ ယနေ့ထိတိုင် ငွေကြေးပိရမစ်ဆိုတာကိုလူတွေတကယ်နားမလည်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ဟာ အရမ်းရှင်းပါတယ်၊ ၈တန်းလောက်အောင်ရင်ကို စီးပွားရေးအတွက် အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော၂၄နှစ်အတွင်း မည်သူကမျှအပြည့်အ၀နားမလည်နိုင်တာ အံ့ဩစရာပါပဲ။ ဒါကိုကြေငြာခဲ့ပြီး လူတိုင်းလဲလက်လှမ်းမှီပါတယ်! အရမ်းတော်တာပဲ။
"လူတိုင်းနားလည်နိုင်သောနည်း" နဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာပြောပါမယ်။
ကျွန်တော်မှာ Leonid(L) နဲ့ Ivan(I) ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ၁၀၀တန် စာအုပ် ၂အုပ်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်က Leonid ကိုပြောမယ် "Leonid မင်းငါ့ဆီကစာအုပ်ကို 1,000 နဲ့ဝယ်၊ ငါမနက်ဖြန်မင်းဆီက 1,100 နဲ့ပြန်ဝယ်မယ်" (ရင်းလိုက်သောပမာဏရဲ့ +10%)
(L) လုပ်မယ်လေ။ ငါ့ကို စာအုပ်ပေး၊ ဒီမှာ 1,000။
block (pool)1 ရလဒ် လက်ထဲမှာ 1000 ရပြီ။ မနက်ဖြန် Leonid ကို 1,100 ပေးရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
လွယ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်သူငယ်ချင်းအသစ် Ivan ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Day2(block 2)
Ivan လာတဲ့အခါ တူညီတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုထပ်လုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းပါတယ်။ Ivan ဆီကငွေဖြင့် Leonid ကို အရင်းအမြတ်ပေးနိုင်အောင် ရောင်းစျေးဝယ်စျေးအနည်းငယ်ပြောင်းပါတယ်။ တခြားနည်းနဲ့ပြောရရင်၊ ဒါဟာ ဒီနေ့စျေးပါပဲ။ overlaps” the buyout price.
(ငါ) Ivan မင်းငါ့ဆီကစာအုပ်ကို ၁၂၀၀ နဲ့ဝယ်မလား၊ ငါမင်းဆီက မနက်ဖြန် ၁၃၂၀ နဲ့ပြန်ဝယ်မယ်။(ရင်းလိုက်သောပမာဏရဲ့ +10%)
(I) လုပ်မယ်လေ၊ ငါ့ စာအုပ်ပေး၊ ဒီမှာ ၁၂၀၀။
အခုငါ့လက်ထဲမှာ ၁၀၀၀+၁၂၀၀=၂၂၀၀ ရှိနေပြီ။
Leonid လာတယ်။ စာအုပ်ပြန်ပေးလာတယ်၊ ငါသူ့ကိုကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း ၁၁၀၀ ပြန်ပေးလိုက်တယ်။
block(pool)2 ရလဒ် ငါ့လက်ထဲ ၁၁၀၀ကျန်တယ်။ Leonid ကိုငွေချေပေးပြီး စာအုပ်ပြန်ရပြီ။ မနက်ဖြန်Ivan ကို ၁၃၂၀ ပေးရမယ်၊ ငါ့လက်ထဲ ၁၁၀၀ ကျန်တယ်။
Day3(block 3)
(L) ဟေ့ငါတစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်။ ငါမနေ့ကပိုက်ဆံပြန်ပေးမယ်လေ၊ ငါစာအုပ်ပြန်ယူမယ်! ငါမနေ့ကလစာရပြီ၊ ပိုက်ဆံမလိုသေးဘူး?မနေ့ကစာအုပ်ပြန်ဝယ်မယ်ရလား?
(ငါ) ရတာပေါ့ Leonid။ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စျေးပြောင်းတယ် ၁၄၅၂ ကျမယ်၊ မနက်ဖြန် ၁၅၉၇ နဲ့ပြန်ဝယ်ပေးမယ်။
Ivan လာသည့်အခါ သူ့ကိုကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပေးချေလိုက်တယ်။ Leonid ရဲ့ငွေကိုအသုံးချလိုက်တယ်။
(I) ဟေ့ ငါစဉ်းစားမိတယ် .......
အခြေခံအားဖြင့် ဒီအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ဟာ စနစ်အတွင်းရှိမန်ဘာများရဲ့ ငွေပိုငွေလျံများကို ဖြန့်ဝေတာပါ။ သင်မြင်တွေ့ရသလိုပါပဲ၊ စနစ်ကို ငွေရင်းမလိုဘဲစတင်နိုင်ပါတယ်။ စနစ်လည်ပတ်နေစဉ်မှာ မန်ဘာတိုင်းဟာ အမြတ်ရနေပါတယ်။ "pyramids" စနစ်နဲ့မတူဘဲ မန်ဘာအရေအတွက် အရမ်းများစရာမလိုပါဘူး။
စနစ်ဟာ တစ်ယောက်ထက်ပိုသော မန်ဘာအရေအတွက်ဘယ်လောက်နဲ့မဆိုစနိုင်ပါတယ် - မိသားစု၊ မြိုံနယ်၊ နိုင်ငံ။ block2ရောင်းချရပြီဆိုတာနဲ့ စနစ်ကစတင်လည်ပတ်ပါတယ်။ ဒါပြီးရင် စနစ်ကသက်မှတ်ထားတဲ့ အတိုးနှုန်းကိုရချင်တဲ့သူရှိတဲ့အချိန်ထိ စနစ်ကလည်ပတ်ပါတယ်၊သို့မဟုတ် ငွေပိုငွေလျှံကုန်သည်အထိလည်ပတ်ပါတယ် ;0
ငွေကြေးသို့မဟုတ် အလားတူ အသုံးပြုမှုရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင် စနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရောင်းဝယ်စျေး ကို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကျပမ်းသတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ သင်္ချာ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကိုအသုံးပြုတာပါ။ မှားယွင်းသော စျေးနှုန်းရွေးခြယ်ခြင်းများဟာ စနစ်ကို အကျလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ စနစ်အတွင်း ကွဲပြားမှုများရှိပါတယ်။ မန်ဘာများအကျိုးအမြတ် %၊ စနစ်ပိုင်ဆိုင်သူ အကျိုးအမြတ် %၊ စနစ်စံယူနစ်စတင်ရန်စျေး၊ ဘလော့ဆိုဒ် အစရှိသဖြင့်ကွဲပြားပါတယ်။ ဒီကွဲပြားမှုများဟာ စနစ်ကို ပြသနာဖြေရှင်းရန် စနစ်ပိုင်ဆိုင်သူမှ သက်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
MMM-94 table.xls ရဲ့့ Screenshot
အမြဲလိုပါပဲ၊ သို့သော်ဆိုတာရှိပါတယ်။ နောက်ကွယ်က သင်္ချာကိုထိန်းထားနိုင်ရန် စနစ်ထဲမှ စံယူနစ်က ဘလော့တိုင်းမှာ တူညီရပါမယ်။ စျေးနှုန်းအသစ်ဟာ ယခင်စျေးနှုနှ်းနှင့်တူညီရပါမယ်။
၁၉၉၄ တွင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ မှန်ကန်သော ငွေကြေးကိရိယာမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လကေ်တွေ့တွင် ငွေထည့်မှုများနှင့် ငွေထုတ်မှုများ များလေ စနစ်တည်ငြိမ်လေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ MMM-94 တွင် wire transfers ကိုအသုံးမချနိုင်ပါ။
ဆာဂျီးမှ အဆိုပါ အယ်လ်ဂိရစ်သမ်ကိုပြသခဲ့သည်နှင့် ၁၉၉၃ခုနှစ်တစ်ခုလုံးကို စနစ်အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုများ၊ အငြင်းပွားမှုများ၊ များစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ SuperCalc ဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုကာ သင်္ချာဇယားများဖြင့် အနာဂတ်တွင် ဖြစ်လာနိုင်သော မန်ဘာပြသနာများကိုကြိုတင်အဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေ့နေများ၊ တရားရေးရာများ၊ စာရင်းကိုင်များစွာဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ များစွာပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီး "share certificate" ကိုအသုံးပြုရန် ရွေးခြယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အသုံးမဝင်၊ လုံခြုံမှုမရှိသော စာရွက်များဖြစ်ပြီး မြန်ဆန်စွာဖြင့် ငွေကြေးစီးဆင်းရန်အသုံးပြုနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပါ။
February 1, 1994 မှာ စနစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 1994 Sergey နဲ့ကျွန်မ Yukhnov မြို့ကနေအထက်5ကီလိုမီတာ, အ Ugra မြစ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာတစ်ချိန်က-a-တစ်နှစ်နွေဦးငါးဖမ်းခရီးစဉ်များအတွက်ခေါင်းနှစ်လုံး။ သစ်တောများ၏အစွန်းမီတာ 100 ကွာအက်စ် Mavrodi ရဲ့စာအုပ် "လူစီဖာငျ့သား" ၏အစအဦးမှာဖော်ပြထားတဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမိုးမခကနေဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မိုးမခ၏ညာဘက်တစ်ဦးနွေဦးနှင့်အတူငယ်လေးတစ်ကမ်းခြေအခြားဘဏ်မှမြစ်ကိုကူး။ ကျနော်တို့ရေမြှုပ်မှိုရှာသစ်တောသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွား၏။ အဟောင်းအဖွင့်အခြို့သောအနှစ်ကမှို၏အပြည့်အဝင့်နီးကပ်နေဖြင့်ရှိပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်က nada ပါပဲ။ အဲဒီနှစ်က nada ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြန်ဦးတည်ကျနော်တို့သစ်တောများ၏အစွန်းပေါ်မှာမှတ်တမ်းပေါ်မှာထိုင်လေ၏။ ဆာဂျီးငါ့ကိုမေးသော်,
"Varshavka မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? (ထိုအချိန်က ကျွန်တော်ဟာ 26 Varshavka မှာ ရှိသော MMM ရုံးချုပ်ကိုတာဝန်ယူထားပါတယ်။)
စီနီယာငွေကိုင်ကမကြာသေးမီကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ သူတို့ဟာ ငွေပေးချေရန် ဂိုထောင်မှ ငွေများကိုယူသည့်အခါ၊ ကြွက်များဟာ ထောင့်များတွင် ငွေများကိုကိုက်ထားသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူက ဒီငွေတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေးခဲ့ပါတယ်။
မြေအောက်ခန်းမှာ ငွေတွေနှင့်ပြည့်နေသောအခန်းကြီးတွေအများကြီးပါ။ အပေါ်ယံအလွှာတွေကိုမဖယ်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်နေသလဲဘယ်လိုသိမလဲ?
သူ့ကို ကြောင်တွေရှာဖို့ပြောခဲ့တယ်၊ ဘာများလုပ်နိုင်မှာလဲ?
ဟုတ်လား။ ဒါဆို စီးပွားရေးသဘောမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒါဟာ [censored] စီးပွားရေးပါပဲ။ လေးလေးနက်နက်မှန်ကန်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှမရောင်းကြဘူး၊ ဝယ်ပဲဝယ်ကြတယ်။
အဲလိုတော့လဲမဟုတ်ဘူး။ တစ်ချို့တော့ရောင်းပါတယ်။ ဘောင်ချာရဲ့ ၂-၃% ပေါ့။ ၂%လောက်က မနက်ဆိုရောင်းသွားပြီး၊ ညနေခင်းကျပြန်ေရောက်လာပြီး "ငါစိတ်ပြောင်းသွားပြီး" "ငါ့မိန်းမကခိုင်းလို့"....
သူတို့က အော်ပရေတာကို မနက်က ဘာအိတ်ချိန်းမှမလုပ်သလိုဖြစ်စေချင်ကြတယ်။"ငါမနက်ကငွေ့ကိုပြန်ပေးမယ်၊ မင်းငါ့လက်မှန်ပြန်ပေး" သူတို့က ဒီလို "ပြန်ပေး" ခြင်းမျိုးအတွက် အော်ပရေတာကိုလာဘ်ထိုးချင်ကြတယ်။
ဘာလို့ရမှာလဲ? သူတို့က ငွေအားလုံးကိုသုံးပြီး မနက်ဖြန် လက်မှတ်တွေပိုဝယ်ချင်ကြတာလေ။ ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန် စျေးတွေကပြောင်းတော့မှာ။ သူတို့က လက်မှတ်တွေအများကြီးရှိရင် မနက်ဖြန်စျေးအပြောင်းအလဲမှာ ဆုံးရှုံးမှုများမှာစိုးလို့။
အော်။ ဒါဆို အခုငွေသွင်းသူတွေဘယ်လောက်ရှိလဲ?
ဒေတာတွေထဲမှာ ၁၅မိနစ် ထူးခြားသူတွေရှိတယ်။
တခြားနည်းနဲ့ပြောရရင် မိသားစုတစ်စုမှာ လူ၃ယောက်ရှိရင် လူပေါင်း ၄၅သန်းဖြစ်ပါမယ်။
ဒီလိုတွက်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်။ တကယ့်ကိန်းဂဏန်းအမှန်ကတော့ ဘယ်သူမျှမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒေတာဘေ့စ်ထဲမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေပဲ၊ နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတော့ဘယ်သူမျှမသိနိုင်ပါဘူး?
မင်းမှန်တယ်၊ ဘယ်သူကမှမရောင်းကြဘူး [censored]!Jesus! လူတွေရဲ့လောဘဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကြည့်! စတုန်းကဒီလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမတွေးဖူးဘူး။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အရောင်းအဝယ်မမျှတာဘယ်လောက်လဲ?
ငါးမျှားခရီးစဉ်မတိုင်မီ ပြီးခဲ့သော အင်္ဂါထိ စာရင်းအင်းများအရ ငွေပေးချေမှုဟာ တစ်ရက်ကို ဒေါ်လာ၃၅သန်းကျော်ပိုများနေပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီပိုလျှံမှုဟာပိုများလာပါမယ်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် MMM "အသားတင်အမြတ်"ဟာ Arab sheik တစ်ခုလုံးထက်ပိုပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ "အမြတ်" ဟာတိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာ လူတိုင်း[censored] ရဲ့ အိပ်မက်ပါပဲ။ [CENSORED] !!! [CENSORED]!!!
မင်းငါတို့ MMM ပုံနှိပ်တိုက်ဆောက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတာမှတ်မိလား? အိမ်ပိုင်ရှင်က ငါတို့ဟာ MMM နဲ့ပက်သက်တယ်ဆိုတာသိပြီး ဒေါ်လာပေးမဲ့အစား MMM လက်မှတ်ပဲပေးဖို့ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။!
ဒါဟာ နားလည်နိင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာထက် လက်မှတ်များဟာ အဆ၁၀၀လောက်စျေးတက်တာများနေတာကို။
ဒါဆိုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ? ကျွန်တော်တို့က ရောင်းသူဝယ်သူတို့ကို နေ့စဉ် ပမာဏမျှတတာလိုချင်တာ။ ကျွန်တော်တို့က ဒီလို "အသားတင်အမြတ်"ကိုမလိုချင်ဘူး၊ မဟုတ်ရင် စနစ်ဟာ "pyramid" ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ငွေထည့်သူတွေတစ်ရက်တည်းမှာ လာရင်တောင် ၁၀၀% ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
[Thoughtful] ၁၀၀%ဟာ တစ်ရက်တည်းမှာဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ သင်္ချာဥပဒေတစ်ခုပါ။ "Games Theory" မျှတသော မျှခြေဖြင့် [ugh-ugh-ugh],၄၀%အတူတကွလာနိုင်ချေဟာ အလွန့်အလွန်နည်းပါးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆာဂျီးကပြောတယ်၊ ဒါဟာ သင်္ချာအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်တစ်ခုသာမကတော့ပါဘူး၊ ဒါဟာ ငွေကြေးနူးကလီးယားပါပဲ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုကျဲချလိုက်ရင်၊ ဖုန်စုပ်စက်ကြီးတစ်လုံးလို၊ ဒီနိုင်ငံကငွေတွေအားလုံးကို အလျင်အမြန်စုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဘဏ်တွေကိုပြိုလဲစေပါမယ်၊ အိတ်ချိန်းတွေပိတ်စေပါမယ်၊ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပိတ်စေကာ၊ စက်ရုံများကိုပိတ်စေပါမယ်။ဒါဟာ ငွေကြေးပျက်ကပ်ပါပဲ၊ ငွေကြေးစနစ်ဟောင်းပျက်စီးသွားပါမယ်။
ဘာမျှလုပ်စရာမလိုဘဲ အမြတ်တွေရနေမယ်၊ တခြားစီးပွားရေးထက်ပိုများတဲ့ အမြတ်တွေရနေမယ်ဆိုရင် လူတွေဘာလုပ်ကြမလဲ?
ဒါကိုပိတ်လိုက်ရမလား? သူတို့ရင်းနှီးလိုက်တဲ့အရင်းကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီး၊ ရပ်လိုက်ရအောင်။ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အတွက် ငွေရပြီးပါပြီ။ ၉၀% ပြန်ပေးမလား၊ ၈၀%လား။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြန်ပေးမလဲဆိုတာကိုတွက်လို့ရပါတယ်။ [censored] ဒီနေ့လို မနက်ဖြန်တွေလဲလာမလား?
ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့လမ်းဟာ အဆံးုမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ဆာဂျီးကပြောခဲ့ပါတယ်။
Strugatsky ညီအစ်ကိုက ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆောင်းပါးဆရာတွေပါပဲ။ သူတို့စျေးသမျှစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ အလွန်ရသလောက်နည်းပါးကိုကြိုက်ပါတယ်။ , “... and from halfway along, I turned back. And ever since, all the paths I have roamed were entangled, and crooked, and forsaken.”
ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက အနောက်နိုင်ငံကိုသွားရမယ်။ ရုရှားတွင် ငွေများနှင့် MMM ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရဲ့ အကြွေးဟာ သူတို့ငွေနှင့်ယှဉ်လျှင်နည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဆိုပါ ဖုန်စုပ်စက်ကြီးကိုအသုံးပြုကာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှငွေများဖြင့် ရုရှားမှလူများကိုပြန်ပေးပါမယ်။ ဖြည်ဖြည်းချင်း ကျွန်တော်တို့ဟာ MMM ရုရှားကိုပိတ်သိမ်းပါမယ် - ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမှာနေတာ ၊ ဘာလို့ကိုယ့််နိုင်ငံကို ဖျက်ဆီးမှာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ကိုအခုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ဒေတာဘေ့ ၁၅သန်းတွင်၊ အနည်းဆုံး ၄၅သန်းတွင် ရုရှားများဟာ MMM တွင်ပါဝင်နေပါတယ်။ အာဏာပိုင်များဟာ မကျေနပ်သူ ၁ဦး၂ဦးကို အမြဲရှာနေနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်အတုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေဖြင့်ဆိုလျှင် လိမ်လည်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးနိုင်ပြီး ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ၄၅သန်းကိုပေးပြီး ဒီ၂ယောက်ကိုလွတ်သွားလျှင်တောင်မှ၊ ဒါဟာ ဥပဒေနှင့်ညိနိုင်ပါတယ်။
ဆာဂျီး မာဗရိုဒီ တစ်ချိန်ကသင့်အနေဖြင့်ပြည်နယ်၏မကြောက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး "ဟုပြောသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့မိုးသည်းထန်စွာဘူဒိုဇာပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့, သင်ပိုကောင်းင်း၏လမ်းထဲမှာရပ်ကိုရှောင်ကြဉ်ချင်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်း၏ကြီးမားသောအလေးချိန်၎င်းထိုသို့ကိုလည်းအလွန်အမင်းအစွမ်းမဲ့င်: သင်ရိုးရှင်းစွာဘေးတိုက်တစ်ဦးခြေလှမ်းစေနိုင်ပြီး, ကအနားမှာရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပညတ္တိကျမ်းဘုံအမှားထဲကနေဘုံကလူပိုင်းခြားထားရုံခြံစည်းရိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောပတ်လမ်းမှာဘယ်တရားမျှမဖွင့်, သာသဘောတရားများနှင့်လမ်းညွန်ရှိပါတယ်။ ဤအမှု၌သင်တို့ကိုတစ်ခုကွာဂိမ်းကစားပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားမခြိုးနိုငျသညျ။ ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားတစ်ကွက်ကိုရှာဖွေလျှင်မူကား, သင်, ပြည်နယ်ဘူဒိုဇာကိုသင်သတိပွုမိသည်အထိပြုလုပ်သုံးစွဲဖို့အချိန်ရှိသည်ရပ်တန့်ရန်ကြွလာပတ်ပတ်လည်လှည့်များနှင့်လက်ျာသငျသညျမှာလှုံ့ဆော်ပေး။ ထိုအခါပညတ်တရားကိုသင်တို့အားအတွက်အခြားကွက်ရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ် ... "
MMM ဟာ ၁၉၉၄ တွင် အနောက်နိုင်ငံများသို့မသွားနိုင်ခဲ့ပါ။ အလွန်ဈေးကြီးပြီး အလွန်အဆင့်မြင့်သဖြင့် UK, US နယ်စပ်တို့တွင် MMM လက်မှတ် တန်ပေါင်းများစွာကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (နောက်တစ်ချိန်မှာ အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်)။ မကြာမီ ရုရှးအာဏာပိုင်များဟာ MMM-94 ကိုအင်အားပြင်းစွာဖြင့် ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ......
၁၉၉၇ မှာ MMM-94 မှ သင်ခန်းစာများရရှိထားသဖြင့် ကျွန်တေ်ာကတွေးထင်မိပါတယ် " အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကို ထပ်နေသော ၂ဆအိတ်ချိန်းစျေးမှ ပမာဏများပေါ်အလိုအလျောက်ရောင်းနိုင်သောအယ်လ်ဂိုရစ်သမမပြောင်းသင့်ဘူးလားလို့ မြင်မ်ိပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာ စနစ်ဟာ မန်ဘာကိုစည်းကမ်းချက်အရ ၁၀၀% ပေးနေစဉ်တွင် မမြင်တွေ့နိုင်ပါ။
ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သင်္ချာသိပ္ပံတစ်ဦးပါရမီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ့အတူတူကျနော်တို့ညဦးတိုင်း SuperCalc ၌ဤအံ့ဖွယ် algorithm ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေ2လနေခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့အဆုံး၌ပယ်ဆွဲထုတ်! ကျနော်တို့သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင် (ရုံ MMM-94 ခုနှစ်တူသော, 30, 50 တစ်လလျှင် 100%) အားလုံးအင်္ဂါများကြိုတင်သတ်မှတ်ထားအမြတ်အောင်အလှည့်ယူခွင့်ပြုတဲ့သင်္ချာပုံစံကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ စနစ်မဆိုအကြောင်းပြချက်က၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးပိတ်ပစ်ပါလျှင်အဘယ်သူမျှမလိမ်လည်လှည့်သည်အခြားတစ်ဝက်ကိုသာ အစစ်အမှန်သိုက် (70% ၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရာခိုင်နှုန်းအားလက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်အဖွဲ့ဝင်တစ်နှစ်ခွဲကသူတို့မတန်တဆအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကျန်ခဲ့သည် ဥပမာအားဖြင့်)။
အဆိုပါစနစ်အထို့နောက် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု 1 စတင် (အသစ်တစ်ခု သံသရာ နှင့်အတူ) အသစ်တစ်ခုကိုမိတ္တူအဖြစ်ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်သံသရာကနေ system ရဲ့ liabilities အားလုံးထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ အဆိုပါပြန်လည်စတင်ရန်စနစ်, နောက်ဆုံးအချိန်ကံကောင်းမဟုတ်ကြတဲ့သူတွေကိုတော်တော်အစာရှောင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျသူတို့ကိုပင်တစ်ဦးဦးခေါင်းက start ပေးစေခြင်းငှါ, - သစ်ကိုသံသရာ၏ပထမဆုံးဘလောက်သို့အဟောင်းသံသရာမှမိမိတို့ရန်ပုံငွေ re-ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကျန်ရှိသောဖို့အခွင့်အလမ်း။ ဒါဟာကြိုတင်ကြေညာခြင်းနှင့်သင်္ချာအတည်ပြု, ရိုးသားပွင့်လင်းပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်အားလည်း6ထိန်းချုပ်မှု parameters များကို အသုံးပြု. မဆိုပစ်မှတ်တန်ဖိုးများနှင့် volumes ကိုတက်သည်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
S kursDS.xls ဇယား Screenshot (Mutual Voluntary Donations-97 အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်)
၁၉၉၇ တွင် ဆားဂျီးနှင့် ကျွန်တောဟာ နေတဲ့နေရာမတူပါဘူး။ သို့သော် ကျွန်ော်တို့ဟာ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာဟာ သူ့ဆီမသွားပြီး အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကိုပြခဲ့ပါတယ်။ သင်္ချာနည်းအရ အတည်ပြုခဲ့ပြီး လည်ပတ်ရန် ကိုသဘောမကျခဲ့ပါ။
ပုံမှန်ရင်းနှီးသူများအတွက် ရှုပ်ထွေးလွန်းပါတယ်။ မည်သူကမျှနားမလည်နိုင်ပါ။
သို့သော် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်ရာတွင် ပြန်လည်စတင်မှုကိုသူသဘောကျသည်။
ပြန်စမယ်? ဟုတ်ပြီ "အိုင်ဒီယာ ကောင်းတယ်" လို့ သူပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် 26 Varshavka မှာ ဒီအယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကိုအသုံးပြုပြီး စနစ်အသစ်ကို စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ကူညီရေး "MMM-97"။ဆာဂျီးဟာ လူတွေကိုလျော့တွက်ခဲ့ပါတယ် - မန်ဘာများဟာ အဆင်ပြေကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ စနစ်ဟာ ကောင်းမွန်ပါတယ်၊ မည်သူကမျှမလိမ်ပါ၊ သို့သော် သေနတ်နှင့်လူများရောက်ာကာ ငွေများအားလုံးကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာ အပြန်အလှန်ကူညီရေး ၉၇စနစ်ရဲ့ အစောပိုင်းသင်္ချာဇယားဟာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ၂၀၀၇ အခြားသင်္ချာပညာရှင်များဖြင့် ငွေကြေးကစားပွဲကိုဖန်တီးခဲပါတယ်။ - Doubal Spiral - MMORG ဒုတိယအသက်အဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းရဲ့ နောက်ကွယ်ကသင်္ချာစနစ်ဟာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ kursDS.xls တွင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ archive လုပ်ထားသော DS_full.xls
၂၄နှစ်တိုင်တိုင် အာဏာပိုင်များဟာ ဆာဂျီးမာဗရိုဒီကို လမ်လည်မှုများနှင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၄နှစ်တိုင်တိုင် ဆာဂျီးမာဗရိုဒီကို conman မှ "ရိုးသားသောလူ" အဖြစ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်
သူဟာ မည်သူ့ကိုမျှ ဒီ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်မပေးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ MMM ဟာ သင်္ချာနည်းအရ သက်သေပြထားသော pyramid shceme မဟုတ်ကြောင်း မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါ။ အတိတ်ကအချက်အလက်များကိုသာ ညွန်းဆိုပြပြီး လူများကိုနားထောင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၂၄နှစ်တိုင်အောင် ဆာဂျီးမာဗရိုဒီကို "ငွေကြေးနူးကလီးယား" မပြန့်ပွားရန်အာမခံခဲပါတယ်။ သူဟာ သူ့ပါဝါကိုအသုံးချကာ တစ်ဦးတည်းအားဖြင့် သူ့ရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် - လက်ရှိငွေကြေးစနစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်လူများပေါ်မတရားတဲ့စနစ်ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲလိုပြီး ပြင်ပအကူအညီမပါကာ သူတစ်ဦးတည်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူ့သမိုင်းကထပ်မံသက်သေပြခဲ့သည်မှာ စစ်သားတစ်ယောက်တည်းဖြင့် စစ်မတိုက်နိုင်တာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။
squid.mp4 ကို 03:50 မှာကြည့်ပါ။
ဆာဂျီးကွယ်လွန်သွားပြီးသည့်နောက် ကျွန်တော်ဟာ MMM အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သမိုင်းကိုသိသော တစ်ဦးတည်းသောသူဖြစ်ပါတယ်။ MMM အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ဟာ လူများကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်ပြီး အသုံးမချလိုက်ရလျှင် လွန်စွာသနားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုအားပြုကာ MMM အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကိုပြောပြကာ ကျွန်တေ်ာအမြင်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆာဂျီးမာဗရိုဒီက မည်သူကမျှမရသင့်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာကတော့ "စိတ်ထားကောာင်းသောသူ" များက ဒါကို ကောင်းကျိုးအတွက် သုံးနိုင်ရန်နည်းလမ်းရှာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
MMM စနစ်များအားလုံးအတွက် ဆာဂျီးဟာ MMM-94 ရဲ့ အခြေခံ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ် မှ "ပြန်စခြင်း" ကိုရွေးခြယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာက MMM-94 အခြေခံကိုပိုမိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ကာ "ကိုယ်ပျောက်" အပြန်အလှန်ကူညီရေး-97 စနစ်ထံကူးပြောင်းကာ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်အသစ်ကို DoubleSpiral ငွေကြေးဂိမ်းအဖြစ်မြှင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာနှင့် ဆာဂျီးတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ကို စတင်သည့်အခါ မည်သည့် ငွေကြေးမှမရှိခဲ့ပါ စနစ်မန်ဘာများကိုလဲအာမခံချက် များမပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့သော် အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ဟာ အားကောင်းပါတယ် သင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာအုပျပြီးနောက်လူတိုင်း algorithm ကိုသိကြပါလိမ့်မယ်။ ချာထောင်ပေါင်းများစွာ၏, စီးပွားရေးပညာရှင်များ, ဘဏ္ဍာရေးဖြစ်ကောင်းဒီ algorithm ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအသစ်သော tools များများစွာနှင့်အတူတက်လာပါလိမ့်မယ်။ တစျခုလုံးကိုပြည်နယ်များ MMM, (ဥပမာ, ဗင်နီဇွဲလားရုံက၎င်း၏အမျိုးသားရေး cryptocurrency စတင် Petro နိုင်ငံ၏ရေနံအားဖြင့်လုံခြုံ) သူတို့ရဲ့သိသာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအာမခံအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နှင့်အတူပြုလုပ်စတင်သုံးစွဲခဲ့လျှင် -94 MMM-Petro နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သားသမီးတို့အဘို့တစ် sandbox 'ထင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်းကိစ္စအဘို့, ဟောင်း MMM-94 က၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအားဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် MMM စနစ် လုံခြုံ ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့မဆိုကြီးမားသောအနောက်တိုင်းကုမ္ပဏီ outdone လိမ့်မည်။ သငျသညျစနစ်ကနေပိုက်ဆံခိုးယူသာသင်္ချာတွက်ချက်အမြတ်အစွန်းကိုမဖြုန်းကြပါလျှင်, ကုမ္ပဏီများအတွက်နီးပါးမျှအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကသူတို့ထောက်ခံသူတွေကိုအဆိုပါစနစ်များကို '' ပိုင်ရှင်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ၏ သင်္ချာအထောက်အထား ရှိခြင်း, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် MMM စနစ်ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေါ်ပေါက်ရေးကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်နည်း ဤအမှုစနစ်များ running start တစ်ချိန်ကလက်ရှိဘဏ္ဍာရေးစနစ်ပြိုကျလိမ့်မည်လော ဆိုလိုသည်မှာထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်း Sergey Mavrodi မှားနှင့်မျှဘဏ္ဍာရေးကမ္ဘာပျက်ရှိရလိမ့်မည်။ ဘာမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ ဒီစာတန်းကို ထုတ်ပြလိုက်ခြင်းဟာ ရရှားနိုင်ငံအတွက် မှန်ကန်သောရွေးခြယ်မှုလို့ယုံကြည်ပါတယ်။
သာရုရှားကယခုအခြားနိုင်ငံများတွင် MMM-2011 ခုနှစ်နှင့်သူ၏နောက်ဆက်တွဲ MMM စနစ်များအတွင်းသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူဆာဂေး Mavrodi ရဲ့လက်ထောက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏များစွာရှိပါတယ်။ ဤလူကိုတိုက်ရိုက်သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်စနစ်၏ပြည်တွင်းရေး အဖွဲ့အစည်းက ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိရပါပြီ။ အဆိုပါ, စေမည် အလွန်အနည်းဆုံး အကောင်းဆုံးကို (နှင့်ကမ္ဘာ့သာ) အတိုင်ပင်ခံနှင့်အနာဂတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ MMM စနစ်များအတွက်နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။
သာရုရှားကအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမှတဆင့်နောက်ဆုံး 24 နှစ်ကြာ MMM ဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေ "ကာကွယ်ဆေးထိုး" လျက်ရှိသည်။ ရုရှားကအထူး Anti-MMM ဥပဒမွေးစားထားပါတယ်, နှင့်အာဏာပိုင်များပါဝါနည်းလမ်းများနှင့်အာဏာ၏ဒေါင်လိုက်သုံးပြီး "ပိရမစ်" ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ သာလျှင် တစ်ဦး MMM စနစ်ရုရှား၌စတင်မရနိုင်တော့အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ဆာဂေး Mavrodi အလားအလာအနာဂတ်ဘေးဆန့်ကျင် (သူနောက်ကျော 1994 ခုနှစ်တွင်လိုချင်သကဲ့သို့) မိမိတစ်ခုလုံးကိုဘဝသုံးစွဲနှင့်ရုရှားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တခြား "ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး" MMM algorithms ဖို့လုံးဝအကာအကွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပွငျဤ "မိတ်ဖက်" နောက်ကျဖုန်တူသောရုရှားကကုသခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်ညာဘက်သူတို့ကိုအစေခံပါလိမ့်မယ်။
Baba Vanga ဟာ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ် "ရရှားနိုင်ငံမှ Pyramid ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်သွားပါမယ်"
ဆာဂျီးမာဗရိုဒီကွယ်လွန်သွားသည့်အခါ လူအများစုက ဒီခန့်မှန်းချက်ဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးထင်ကြပါတယ်။ တကယ်ရုပ်လံးုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ရော?
ဗီရာချယ်လ်စလဗတ် မာဗရိုဒီ ပို့စ်
လူမှုကွန်ယက်အတွင်းမှ ဗီရာချယ်လ်စလဗတ် မာဗရိုဒီ
ဗီရာချယ်လ်စလဗတ် မာဗရိုဒီ archive